Wixii Xunba Mad: Farmaajo & RW Kheyre baa leh? | Hordhac News
Wixii Xunba Mad: Farmaajo & RW Kheyre baa leh?
By Hordhac on August 8, 2017 No Comment
Waxaa isweeydiin mudan marka waxa madaxda dalka ugusareeysa looxagxaganayo? Waa naga codsiye fadlan
haladaayo dadka caadifada qabyaaladeed lagu kicinayo, ee dacaayadaha rakhiista ah lagu buufinayo, ee colaad-qabyaaladeedka lagu shubayo, inta dumarka iyo caruurta makarafoono iyo boorar loosoodhiibay. Waa kabadbadin iyo khalad weyn. Bal ufiirso Kheeyraa “Hiraab neceb, gaar ahaanna beesha Habar-Gidir!”…..IWM baa la afuufayaa. Soow kama wanaagsanaan laheyn inta marasta loosoo dhiibi lahaa qurunkaa, bal xal ka macquulsan, oo heybad iyo sharaf kujirto in lala yimaado, taasoo xal u noqon karta arinta Gacan-kudhiigle dable Ceeydiid?
Dhanka kale, dheeshan marna Hawiye jeeb lagala soobaxayo, markii ladoonana isla jeebkii Hiraab lagala soo baxayo,
Marxuum Cabaas Siraaji
iyadoo beel gaar ah loola danleeyahay, oo lagu faquuqayo, horaa loogu daalay. Allaha unaxariistee Marxuum Faarax Gololleey, oo ahaa mas’uul Soomaali oo dhami xikmad ku taqaana, ayaa ciyaartan Hiraab mararka qaar jeebka kalasoo bixista ah hore u sheegay, ereyaduu isticmaaley, oo dadka Koonfureed intooda badani wada yaqaanaanse, soo qori maayo, balse dadoow Hiraabnimada meel aaneey shuqul kulaheyn yaan lagu camcaminin.
Gacan-ku dhiigle dable Ceeydiid naf dhanbaa kumaqan, oo dhalinyarada Soomaaliyeedoo dhan Iftiin baxaya u aheyd. Maxkamad baana xukuntay. Nasiibdarose! Hadiiba reerkii wiilkooda xaq-darada looga khaarajiyey cafinlahaayeen, qaabka dadka qaar hadda u dhaqmayaan, ciil, caro iyo caloolyoow ayey qoyskaa kusii kicineeysaa, dareenkoodana weey ugasii dareeysaa, marka wax dadkan lataliya, oo u caqliceliya malawaayay toloow?
Tan kale; hadii maanta reerka marxuum Cabbaas Siraaji laga dilay Allaha u naxariistee, warbaahinta tagaan, oo eey kasheegaan in eey cafiyeen gacan-kudhiigle Ceeydiid, dowladi maqisaasi karto. Hadiise dadkii wiilkooda ladilay, hanoola dilo taagan yihiin, maxkamadna xukuntay, dadkii xal wanaagsan oo Gacan-kudhiiglaha lagusii deeynayo, wado wanaagsan uga shaqeyn lahaa, eey u hanjabayaan madaxweynihii dalka, raysalwasaarihii qaranka, iyo waliba dadkii iyo deegaannadii eey ka kala dhasheen, oo qabyaalad dad lagu kicinayo, wallee u maleynmaayo in wanaag kasoo baxayo arintan.
Bad iyo Beel daran, waxay liqaan banaanka ayaa lagu sugaa
Tani waxeey lamid tahay buuqii la kiciyey markii Sh.Xasan Daahir Aweys dowladu lawareegeeysey, sida qabyaaladii loo buufinayey, boorarkii iyo makarafoonmadii dumarka iyo caruurta loo soodhiibayey. Nasiibwanaagse! Madaxweynihii xilligaa waxba uma jixinjixine, awooda dowladeed ayuu duldhigay oo u isticmaalay, oo waakii Alpha Group ka adeejiyey. Cidina markaa jeebka kalama soobixin “Kaarka Hiraab!”, mararka la lasoobaxo iyo cida kaliya ee jeebka kala soobaxdase Soomaali weey wadataqaan.
Gacan ku Dhiigle: Dable Caydiid
Maxkamada saree qaranka ummada Soomaaliyeed, waxeey xukuntay in uu dilkii lagu khaarijiyey marxuum Cabbas Siraaji kas iyo ulakac ahaa. Wuxuu gudoomiyaha maxkamada sare sheegay in horta qoreygu cabbeyn rabo, jiheyn rabo, iyo shiishid, si sujuudda aad wax ugatoogato. Siduu sheegay gudoomiyuhu meesha dilku kadhacay, waxaa kahoreeysey goob check-point ah, oo askarta dowladu joogaan. Wuxuu yiri: “Waa meel aanu kasoo gudbikarin qof aan ID-giisa lagusoo deyn”. Wuxuu gudoomiyuhu intaa kudaray in meeshu aaneey aheyn meel cadowga looga baqayo. Wuxuu yiri: “Baabuurtu weey isdaba socdeen. Kan xeer-ilaaliyaha ID-kaarkooda ayey kusoo gudbeen. Wasiir Cabbaas iyo askarigii lasocdeyna ID-gooda ayey iyana kusoo gudbeen.
Waloow meel lagu kalashakiyo aaneey meeshu aheyn, hadana markii xabada hore kor loogu riday gaarigii marxuum Cabbaas, waxeey shideen nalka dhexe, bal si loo aqoonsado, loogana shakibaxo, una muujiyaan in aaneey cadow aheyn, kalsooni galin iyo wardhib majiro ayey ushideen”. Waxaase Nasiibdarro! Jawaab looga dhigay in wasiir Cabbaas aan xitaa gaarigiisa labeegsan, oo aan isaga xataa meelkale xabadda looga dhufane, barta sujuuda ah lagala beegsado.
(Visited 233 times, 1 Soo booqatay Maanta)
Wixii Xunba Mad: Farmaajo & RW Kheyre baa leh? added by Hordhac on August 8, 2017